Han Mya – Posted by Thwal
– LCCI Level III
– English -4 Skills
– Experience over4yrs
– လျှောက်ထားလိုသူများသည် [email protected] ကို mail ပို့ပြီးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– အသေးစိတ်လိုပါက 09-253725891 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. 332 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ